ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: Chatter(ချက်တာ) နှင့် Blogger (ဘလော့ဂါ)
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Thursday, September 13, 2007
သယ်ရင်း ဒီပို့စ်ကို ငါ sharing လုပ်ဖို့ မသွားတယ်နော်
ကောင်းတယ်ကွာ.. သံလွင်အိပ်မက်အတွက် သိမ်းထားမယ်ဆို.. အခုတော့ ဘလော့ဂ်မှာပဲ တင်လိုက်ပြီပေါ့
ဂွတ်တယ် နေဘုန်းလတ်ရေး)
ကိုနေဘုန်းလတ်ပြောတာကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ်..
chatter and blogger
blogger and chatter ကြားက ကွာခြားချက်
နေဘုန်းလတ်ရေ.. သိပ် ရှင်းလင်း ကောင်းမွန် မှန်ကန်တဲ့ တင်ပြချက်တွေပဲ ။
ဒီပို့စ်လေး သိပ်ကောင်းတယ် ကိုနေ-ရေ
အကိုရေ.. ဒီပို့စ်လေး တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျို့
chatter တွေကို blogger တွေ မဖြစ်လာရင်တောင် blog တွေကို ဖတ်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင် တဖြည်းဖြည်း စည်းရုံးရမှာပဲနော်
ဒီပိုစ်လေးကို တော်တော်လေး သဘောကျပါတယ်ရှင်..
နေဘုန်လတ်ရေ.. ဒီစာလေးကို..ပြည်တွင်း ဂျာနယ်..မဂ္ဂဇင်း တခုခုမှာ ထဲ့နိုင်အောင်လုပ်ပါလား လို့ အကြံပေးချင်တယ်။ သံလွင်မှာတင်မယ်ဆိုရင်တောင် သံလွင်ပရိသတ်တွေအတွက်..ပြောစရာတောင်မလိုတာပဲ။ ပြောဖို့လိုမဲ့လူတွေဆီရောက်အောင်ပို့နိုင်ရင် ပိုကောင်းမလားလို့ပါ။
ကိုနေဘုန်းလတ်ရေ ဒီပိုစ့်လေး ကောင်းသဗျို့
ဒီပို့စ်လေးကို မိုးဂျာနယ်ကိုပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ...။ သုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ...။ ကွန်မန့်ဝင်ပွတ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျာ ...။
ကိုနဘလ အားလုံးက အပေါ်မှာ ကောင်းတယ်ချည်းပဲပြောသွားတော့ ထူးပြီး ကောင်းပါတယ်လို့ ဆက်မပြောတော့ဘူးဗျာ...း)
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က ဘလောက်ဂါဆိုပြီးတော့ ကောင်းတာချည်းပဲ စွတ်ရေးပြန်လည်း သူများတွေက ပြောအုံးမယ်.. နောက်တစ်ခါ ဘလောက်ဂါတွေရဲ့ မကောင်းတဲ့ အချက်ကိုရေးဗျာ.. ဟတ်ဟတ်
ကောင်းတယ်ဗျာ...ကျနော်လဲ လူမဖတ်တဲ့ ဂျာနယ်တွေကို
When I read your article, I reconsider myself whether i amachatter or blogger. Because your article show clearly the bad things of chatter.
And also attract me to read blogs...
Photo ChitOo said...
I have same feel with you . we are who show from front is good ..and who are follow also good..looking forward to see
အကျိုးပြုဆောင်းပါးလေး တပုဒ်ပါပဲ ကိုနေဘုန်းလတ်။ ကျနော် စဉ်းစားမိတာလေးတွေလဲ ဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကတော့ ချက်တာနဲ့ ဘလော့ဂါမှာ ဘလော့ဂ်ရေးရတာက ပိုအားစိုက်ရ၊ ပိုတာဝန်ယူရတဲ့ အတွက် တာဝန်ပိုပြီးလို့ ဘလော့ဂ် ရေးရတာက ပိုကောင်းမွန်တာပါပဲ။ ပိုအကျိုးရှိတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ချက်တင်း ထိုင်သမျှတိုင်းဟာ အကျိုးမဲ့တွေ လုံးဝ ဥဿုံဖြစ်သွားတာတော့ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ ကျနော်လည်း ချက်တင်းကို နှစ်နဲ့ချီ ထိုင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ချက်တင်းထဲကနေ အပြင်က လူတချို့ထက်တောင် နားလည်မှုရှိ၊ စိတ်ချင်းတူတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ရခဲ့ဖူးတာတွေ ရှိတယ်။ သူတို့တွေ အခုထိကို ကျနော်နဲ့ အဆက်အဆံ မပြတ် ရှိနေတုန်းပဲ။ ဒါကတော့ ချက်တင်းရဲ့ နည်းပါးလှတဲ့ ကောင်းကွက်ထဲက တခုပါပဲ။
ကိုနေဘုန်းလတ်ပြောသလို ချက်တာတွေကနေ ဘလော့ဂါတွေ ဘ၀ကို ကူးပြောင်းကြသူ များလာရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာ။ များလည်း များလာမယ့် အလားအလာတွေ ရှိပါတယ်။ :)
>ကိုကလိုစေးထူး - အစ်ကိုပြောတာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ ... ကျွန်တော့်ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ လိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိ နေပါတယ်။ ချက်တင်ထိုင်းခြင်းရဲ့ ကောင်းကွက်လေးတွေကို အဆင်ပြေတဲ့အခါ ကျွန်တော်ရေးပါဦးမယ်။ အဓိက ကတော့ စိတ်ရင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ် အစ်ကို။
> မဘာညာ - မဘာညာပြောသလိုပဲ ကိုယ်က ဘလော့ဂါဖြစ်နေလို့ ကောင်းကွက်တွေပဲရှာရေးနေတယ်လို့ အများက ထင်ကြမှာကို ကျွန်တော်လဲ စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်လာလို့ ကောင်းကွက်တွေကို လိုက်ရှာပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုလေးတွေရှိနေတာကို သိခဲ့ရလို့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားခဲ့တာပါ။
ကိုနေဘုန်းလတ်ရေ - ဒီပို့စ်တက်တဲ့နေ့ကတည်းက ကွန်းမန့်ချမလို့ပါ။ ဗမာလို ရိုက်လို့ရတဲ့ အချိန်ကိုစောင့်ရင်း နောက်ကျသွားတာနဲ့ ချီကျူးစရာ စကားလုံးတောင်မကျန်အောင် စုံနေပြီဗျာ။ Blog မှာပဲတင်တင်၊ သံလွင်မှာပဲရေးရေး၊ ဂျာနယ်ထဲပဲထည့်ထည့် ဒီပို့စ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွက်လပ်တစ်ခု၊ မေးခွန်းတစ်ခုကို ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ဖြေကြားပေးလိုက်တာပါပဲ။ နောက်နောင်များ Chatter & Blogger ဘာကွာလဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မှာ လက်ညှိးညွှန်စရာ စာကောင်းတစ်ပုဒ်ရှိသွားပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလိုစာမျိုးတွေ များများရေးပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ။
တကယ်.. မမီဆီက မေးလ်ရတကတည်းက ဖတ်နေတာ.. ချက်ချင်းဘလော့ခ်မှာလဲ လာဖတ်တယ်.. ကောမန့်ချမလို့.. အားလုံးက အပေါ်မှာ ပြောထားသလိုပဲ.. တကယ်ကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးပါ.. =)
bamar blogger boedaw ( မမခွန် ပြောတာ ) အဲဒီ့ဘွဲ့ပေးမယ်..
တော်တော်ကောင်းတဲ့ အရေးအသားပါပဲ.. အချက်အလက်အားလုံးမှန်တယ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်..
ဒီလူတွေတော်တော်များများလဲ ခုဆို ဘလော့လောကထဲကိုဝင်လာကြပါပြီ... ဒါပေမယ့် တော်တေ်ာများများကတော့ဖိုရမ်တွေထဲမှာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ ညင်းလိုက် ခုန်လိုက် ဆွေးနွေးနေကြဆဲပါ.. တချို့ဖိုရမ်မာများကျတော့လဲ ဖိုရမ်တကာလှည့်ပြီး ရန်ဖြစ်ဆဲပါ..
တကယ်တမ်းပြောရရင် online source ကို အများဆုံးဖြန့်ဝေပေးနိုင်တာ ဖိုရမ်တွေပဲ လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်.. ကွန်မြူနတီဖိုရမ်တွေရှိသလို.. ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဖိုရမ်တွေလဲရှိပါတယ်.. ဧာတ်ပုံဗွီဒီယိုရှယ်ယားရင်းလုပ်တဲ့ဖိုရမ်တွေရှိသလို.. သိကြတဲ့အတိုင်း နိုင်ငံရေးဖိုရမ်တွေလဲ ရှိကြပါတယ်.. အဲဒါတွေက မြန်မာဖိုရမ်တွေပါ...
projectW လိုဖိုရမ်လို resource အများကြီးရနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ဖိုရမ်တွေလဲ အများကြီးပါ..
ဒီတော့ ချက်တင်ဝင်တာထက် ဘလော့လောက က ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာလဲ မှန်ပါတယ်.. ချက်လိုအပ်သလို.. ဘလော့လိုအပ်သလို. ဖိုရမ်လဲ လိုအပ်ပါတယ်.. ဘလော့ဂါတွေ အချင်းချင်း သိကြွမ်းသွားကြလို့ ချက်ကြသလို.. ဟဲဗီးတော့ပစ်တွေကို ဖိုရမ်တွေမှာ ၀င်ဆွေးနွေးကြရင် အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ.....
ဥပမာ အလွယ်ဆုံးပြောရရင်.. ဘလော့တစ်ခုမှာ ပါတဲ့ စီဘောက်စ်က ချက်အသေးစားလေးတစ်ခုဖြစ်သလို.. ခုလို ကျွန်တော်တို့ ရေးနေတဲ့ ကွန်မန့်ဘောက်စ်ကလဲ.. ဘလော့ပိုင်ရှင်တင်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ၀ိုင်းဆွေးနွေးကြတဲ့ ဖိုရမ်အသေးစားလေးလို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်...
ဒီပို့စ်လေးရဲ့ ပထမဆုံးအပိုဒ်မှာ `Chatter ဆိုတာ Internet သုံးတဲ့ အချိန်တွေထဲက တော်တော်များများကို online ပေါ်မှာရှိတဲ့ mIRC, Gtalk, Skype, vzochat စတဲ့ Chatting Software တွေကို သုံးပြီး မိတ်ဆွေတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိဘဆွေမျိုးတွေ၊ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့သူတွေနဲ့ စကားစမြည် ဟိုဟိုဒီဒီ ပြောခြင်းနဲ့ ကုန်လွန်စေတဲ့သူတွေကို ဆိုလို ပါတယ်။ ´ လို့ ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါတယ် ...။ အင်တာနက်ကို သုံးကြတဲ့နေရာမှာ သုံးစရာအများကြီးရှိပါတယ် ...။ အဲဒီ့ အများကြီးထဲမှာမှ chatting တစ်ခုတည်းကိုပဲ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများ သုံးနေကြတဲ့သူတွေကို သာ ကျွန်တော်က chatter လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့လဲ chat ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ... အင်တာနက်အသုံးပြုချိန်ရဲ့ ရာခိုင်းနှုန်းတော်တော်များများကို chat ခြင်းနဲ့မကုန်လွန်စေပါဘူး။ chatting ကရနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ကျွန်တော်ရေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။
September 15, 2007 at 6:02 AM
ကိုနေဘုန်းလတ် ပြောတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချက်ဆင်ဆိုတာ အဆိုးကြီးတည်း မဟုတ်ပါဘူး အကောင်းတွေလဲ ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုနေဘုန်းလတ် ရေးတဲ့ အထဲမှာ ချက်တင်ရင် အားသက်ချက် အချို့ကို လည်းအများကြီး မဟုတ်တောင် အနည်းငယ် ညွှန်းဆိုပြသင့်ပါတယ်။
အဲလို ညွှန်းဆိုပြီး ချက်တင်က ရတဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဘလော့ဂ်ကရတဲ့ ကောင်းကျိုးနှစ်ခုကို နိုင်းယှဉ်ပြသင့်ပါတယ်။
အဲဒါဆိုရင် ဆောင်းပါးရဲ့ ဆိုလိုရင်းက ပိုပြီး ပိုလွင်လာမယ် လို့ ထင်မိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်လေ့လာ မိသလောက် အနောက်တိုင်း နိုင်ငံတွေမှာ ချက်တင်ထိုင်တဲ့ အလေ့ အလေ့အထ မထွန်းကားပါဘူး။
အဲဒါ ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဥဏ်မီသလောက် ပြောရရင်။ အနောက်တိုင်းသည် ယဉ်ကျေးမှု အစနစ်အရ ပတ်ဝင်ကျင်မှာ လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာပေါင်း သင်းဆက်ဆံ နိုင်ပြီး၊ မြန်မာသည် မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှု အနေထားအရ မိန်းကလေး အများစုသည် ပြင်ပတွင် လွတ်လပ်စွာ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ သွားလာခွင့်မရှိကြပါ။
ယင်းအခြေအနေ မျိုးရှိသည့်အခါမှာ ချက်တင်တွေပေါ်လာတော့ ယဉ်ကျေးမှုအရ ပိတ်လှောင်ထားတဲ့ အတားဆီး တစ်ခုကို နည်းပညာ အကူနဲ့ ကျော်ဖြတ်ဖို့ရာ အခွင့်ရေး တစ်ခုပေးလိုက်သလို ဖြစ်လာပြီး မိန်းကလေး အများစု ချက်ကို သဘောကျကြခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်း အသားကျသွားချိန်မှာ တော့ ဘယ်သူမှ ချက်တင်ကို မထိုင်ကြတော့ပါ။
လောကတွင် ဘယ်ရာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သုံးတတ်လျှင် အသုံးဝင်ပါသည်။ ဘယ်အရာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးများလျှင် ဘေးဖြစ်ပါသည်။
လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်ဖို့ မဖြစ်မနေ သောက်သုံးဖို့ လိုအပ်တဲ့ ရေပင်လျှင် သောက်တာများက ဘေးဖြစ်နိုင်ပါသည် ။
နောက်ဆုံး ပြောချင်တာကတော့ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကို ကွန်ပဲရားလုပ်ပြတဲ့ အခါမှာ နှစ်ခုလုံးရဲ့ အားနည်းချက် အားသားချက်တွေကို ထည့်သွင်းရေး သားသင့်ပါသည်။
သို့မှသာလျှင် ပိုဟာပိုအားသာသည် ဆိုသည်ကို ပေါ်လွင် ထင်ရှားစွာ တွေ့မည်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကောင်းတယ် ဆိုတာထက် လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်လေး ကို အမြင်ကိုအမြင် အတိုင်း ချရေး သွားရဲတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အားလေးစားပါတယ်
ပြောမယ်စဉ်းစားထားတဲ့ စကားတချို့ကိုပါ ထည့်ပြောသွားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ
ကိုနေဘုန်းလတ်ရေ တကယ့်ကို online စာရေးဆရာပါပဲ
September 16, 2007 at 6:23 AM
ဒီပို့စ်လေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ဖြည့်စွတ်ပြောချင်နေတာလေးတွေကို ကွန်မန့် ၃ ခုအနေနဲ့ ရေးပေးထားပါတယ်။ ကိုစိုးဇေယျရဲ့ ကွန်မန့်လေးကိုဖတ်ပြီး စဉ်းစားမိလာတာလေးတွေကို ပို့စ်တစ်ခုအနေနဲ့ အမြန်ဆုံးတင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်။
chatting တစ်ခုတည်းကိုပဲ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများ သုံးနေတဲ့ဦးရေ မြန်မာမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် နည်းမယ်လို့ထင်တာဘဲ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာက Internet သုံးရတာ ဈေးကြီးတယ် ဒါကြောင့်အများအားဖြင့် အင်တာနက်ကို အဓိကအရေးကြီးကိစ္စများသုံးရင် chattingကိုလိပ်ဥလို့သဘောထားပြီး စိတ်ပြေလက်ပျောက်သုံးတဲ့ဦးရေက ပိုများမယ်လို့ထင်တာဘဲ စာရင်းတော့အတိအကျမပြုစုထားမိတော့ ကိုနေဘုန်းလတ်လို တပ်အပ်မပြောနိုင်ပါဘူး။ ကျိန်းသေတာတော့ နိုင်ငံခြားမှာ Chatting Software တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် မိတ်ဆွေတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့ (ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့သူများ မပါပါ) စကားစမြည် ဟိုဟိုဒီဒီ ခေတ္တခဏ ပြောနေရလို့ အသက်ရှုနေတဲ့စက်ရုပ်ဘဝမှာနေလို့ရနေတာပါ အဲဒါကို အချိန်ဖြုန်းနေကျတာပါလို့ဆိုလာရင်လည်း ........ :( အဲနိုင်ငံခြားမှာ Internet Full Access ရလို့ အချိန်အတော်တော်များများကို chat တစ်ခုထဲအတွက်သုံးနေတဲ့သူများရှိခဲ့ရင်တွေ့ခဲ့ရင် ချီးကျုးတယ်အားကျတယ် လို့ပြောပေးပါ။ :P မှားပြောမိတယ်ဆိုရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါ။ Anyhow thanks for your post.
P.S->ကိုစိုးဇေယျထွန်းကို မသိလို့မေးပရစေ မြန်မာနိုင်ငံမှ မိန်းကလေး အများစုသည် chatting programများတွင် ဘယ်လိုများ လွတ်လပ်စွာ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ နေပါသလဲ?
တအားကောင်းတယ် အစ်ကိုရာ လူငယ်တွေ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်
ပြန့်ကျဲနေတဲ့အခြေအနေတွေ .. သတိမမူမိတတ်တဲ့ အနေအထားတွေကို အခုလို စုစုစည်းစည်း စကားလုံးထိထိမိမိနဲ့ တင်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။
တကယ်တော့ ကွန်ပြူတာ/အင်တာနက်ကို အစိမ်းသက်သက် စသုံးသူတွေအတွက်တော့ chatting က အလွယ်တကူပဲ ရင်းနှီးမှုပေးနိုင်တယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတခုကိုတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်က ရှာတတ်ရမှာပေါ့လေ..။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အွန်လိုင်းသူငယ်ချင်းတွေဆီကနေ ဗဟုသုတတွေရလာမယ် .. ဆွေးနွေးတဲ့အခါလည်း ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း ..သူ့နိုင်ငံအကြောင်း .. ကိုယ့်အလုပ် သူ့အလုပ် ..ဒါတွေကနေတဆင့် chatter ကို ပိုပြီးလေ့လာဖြစ်အောင် တွန်းအားတမျိုး ပေးတတ်ပါတယ်။ သူများက ကိုယ့်ထက် language သုံးစွဲမှုအားသာနေတာက စပြီး .. တခြား skill, general knowledge တွေ အဆုံးပေါ့..။ ဒီတော့ .. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗဟုသုတ ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်အင်တာနက်မှာ အချိန်ယူတတ်လာမှာပဲ..။ အဲဒီကနေမှတဆင့် .. ဖိုရမ်ဆိုတာတွေ ၀င်တတ်လာမယ်.. နောက်တော့ .. ဘလော့ဆိုတာကို ထိတွေ့လာမယ်။ ဘလော့တွေ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့မှ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့တခု တည်ဆောက်ချင်လာမယ် ..။ ဒါက ကျနော်ထင်တဲ့ process ပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ .. အချိန်အတိုင်းအတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲချင်စိတ် (၃)မျိုးက အခြေခံလည်းဖြစ် အဓိကလည်းကျတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အကိုရေးထားတဲ့အထဲမှာ “စဉ်ဆက်မပြတ်အားထုတ်ချင်စိတ်” ဆိုတာကို တကယ်သဘောကျတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် တခါတလေ ဘလော့နဲ့ဝေးဝေးမှာ ရောက်နေတတ်တယ်။ ဒီတော့ အခု ဒီစာသားနဲ့ သတိပြန်ပေးရမယ်။ (ကွန်မင့်ရှည်သွားတာ ဆောရီးဗျာ။)
Nice man.That makes sense.
I just want to say both of those the blogger and the chatter are don't have to do anything.
They looks like have so many time.
I would like to use time for own benefit.
Both of those are looks like 109 110.
အစ်ကို့ ဆိုဒ်ကို လင့်လိုက်ပါရစေနော်
လူတွေအားလုံး chat & blog ကိုမခွဲခြားတတ်ကြသေးဘူး
ဒီပို့စ်ကို ခုမှဖတ်မိတယ် .. ကောင်းလိုက်တာလို့ မပြောခဲ့တော့ပါဘူးး .. chatter နဲ့ Blogger ကို တကယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ရေးသွားတာ တော်တော်မိုက်တယ် .. :)